Shiinaha Cuntada Fasalka Gelatin warshad iyo soosaarayaasha | Yaasiin
Gelatin ganacsi wuxuu ku kala duwan yahay 80 ilaa 260 garaam oo Bloom ah iyo, marka laga reebo waxyaabaha gaarka ah, waa bilaash midabyo lagu daray, dhadhanno, walxaha ilaaliya, iyo waxyaabo kiimiko lagu daro. Gelatin waa guud ahaan loo aqoonsan yahay inuu yahay cunto badbaado leh waxyaabaha ugu xiisaha badan ee gelatin ay yihiin astaamaha-dhalaalka-ee afka iyo awooddiisa sameynta jel-celisyada la-beddeli karo. Gelatin waa borotiin laga sameeyay qayb ahaan hydrolysis-ka kolajka. Gelatin heerka cuntada ah waxaa loo isticmaalaa inuu yahay walxaha jilicsan ee sameynta jelly, marshmallows iyo nacnac cirridka. Waxaa intaa dheer, waxaa sidoo kale loo isticmaalaa inuu yahay wakiilka xasilinta iyo dhumucda wax soo saarka cufnaanta, caano fadhi iyo jalaatada.
Xoog Jelly Bloom 140-300Bloom
Nafwaayay (6.67% 60 ° C） mpa.s 2.5-4.0
Gelatin waxaa si ballaadhan loogu adeegsadaa macaan sababta oo ah waxay xumbo, jel, ama sii adkeyneysaa gabal si tartiib ah u milma ama afka ku dhalaala.
Cudurrada sida beenta ciridka ayaa ka kooban boqolkiiba gelatin aad u sarreeya. Nacnacyadani si tartiib tartiib ah ayey u milmayaan sidaas awgeedna waxay u dheereynayaan ku raaxeysiga nacnaca iyagoo jilcinaya dhadhanka.
Gelatin waxaa loo isticmaalaa qanjirrada la karbaashay sida marshmallows halkaas oo ay u adeegto si loo yareeyo xiisada dusha sare ee sharoobada, lagu xasiliyo xumbada iyada oo la adeegsanayo isku-dheellitirnaan kordhay, lagu dejiyo xumbada iyada oo loo marayo gelatin, lagana hortago in sonkorta la caddeeyo.
Caanaha iyo Macmacaanka
Macmacaanka Gelatin waxaa lagu diyaarin karaa iyadoo la isticmaalayo nooca A ama Nooca B gelatin leh ubaxyada u dhexeeya 175 iyo 275. Markay sare u kacdo Bloomka ayaa gelatin ka yar ee loo baahan yahay si sax ah loo dejiyaa (ie 275 Bloom gelatin wuxuu u baahan doonaa qiyaastii 1.3% gelatin halka 175 Bloom gelatin u baahan doono) 2.0% si loo helo tiro siman). Macaaneeyeyaal aan ahayn sukrose ayaa la isticmaali karaa.
Macaamiisha maanta waxay ka walaacsan yihiin qaadashada kalooriga. Macmacaanada gelatin ee caadiga ah way fududahay in la diyaariyo, dhadhamin wacan, nafaqo leh, oo laga helo noocyo kala duwan oo dhadhan ah, oo ay ku jiraan oo keliya 80 kalori halkii koob oo nus koob ah. Noocyada aan sonkorta lahayn waa sideed kaloori oo keliya halkii adeeg.
Hilibka iyo Kaluunka
Gelatin waxaa loo isticmaalaa in lagu mariyo waxyaabaha la yiraahdo aspics, madaxa farmaajo, souse, duubabka digaaga, dhaldhalaalka iyo haamaha qasacadaysan, iyo waxyaabaha hilibka jellied ee nooc kasta leh. Gelatinku wuxuu u shaqeeyaa si uu u nuugo casiirka hilibka iyo inuu qaab iyo qaab u siiyo alaabooyinka haddii kale kala daadsan. Heerka isticmaalka caadiga ah wuxuu u dhexeeyaa 1 ilaa 5% iyadoo kuxiran nooca hilibka, qadarka maraq, gelatin Bloom, iyo qaabka la doonayo badeecada ugu dambeysa.
Khamriga iyo Casiirka Casiirka
Adoo matalaya sida xinjirowga, gelatin waxaa loo isticmaali karaa in lagu di'iyo wasakhda inta lagu jiro soo saaridda khamriga, biirka, khamriga iyo casiirka. Waxay leedahay faa'iidooyinka nolosha shelf ee aan xadidneyn qaabkeeda qalalan, sahlanaanta maaraynta, diyaarinta degdegga ah iyo caddaynta cajiibka ah.
Ku hay weel si adag u xiran, oo lagu kaydiyay meel qabow, qalalan, hawo leh.
Ku hay GMP aag nadiif ah, si fiican u xakamee qoyaanka u dhexeeya 45-65%, heerkulka 10-20 ° C. Si macquul ah u hagaaji heerkulka iyo qoyaanka gudaha qolka bakhaarka adoo hagaajinaya hawo-qaboojinta, qaboojinta iyo uumeynta qoyaanka.